Ciidamada Uganda oo Dad iyo Duunyo Ku Xasuuqay Duleedka Degmada Baraawe Ee Sh/Hoose.
Saturday January 07, 2017 - 10:30:52 in Wararka by Super Admin
Markale ciidamada shisheeye ee xoogga ku joogga qeybo katirsan gobolka Sh/Hoose ayaa xasuuq aan loo meel dayin kula kacay dad shacab ah iyo duunyadii ay dhaqanayeen.
Wararka ka imaanaya gobalka Shabeelada hoose waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Uganda ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ay dad iyo xoola ku laayeen deegaan hoostaga degmada Baraawe ee gobalkaasi.
Shisheeyaha ayaa la xaqiijiyay in si bareer ah ay rasaas u huwiyeen labo wiil dhalin yaro ah oo reer miyi ah kuwaasi xoolo ku ilaalinayay deegaan lagu magacaabo Wareer-male oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Baraawe.
Dad Goob joogayaal ah ayaa sheegay in marka lagasoo tago labada qof oo ay ciidanka AMISOM ay toogteen ay dileen inka badan 65 neef oo ka mid ah xoolihii ay goobtaasi ku ilaalinayeen labada wiil ee shahiiday, xoolaha ay rasaasta ku laayeen ciidamada AMISOM dhammaantood waa geel sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dhacdadaan naxdinta leh ayaa kusoo aadeysa xilli degmada Baraawe uu ku suganyahay taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowlada Uganda Katumba Wamala iyo saraakiil kale waxaana laga yaabaa in Xasuuqan ay Uganda dhaqaale hor leh uga raadsanayso waxa loogu yeero beesha caalamka oo Uganda usoo igmaday kala gaabinta shacabka Soomaaliyeed.
Warar kale ayaa sheegaya in dhimashada dadka shacabka ah ay gaartay 3 qof oo waxaa dhaawac u dhintay qof kale oo ay ciidanka Uganda rasaaseeyeen, waa xasuuqii 3-aad oo ciidamada AMISOM ka geystaan gobolka sh.hoose 30 maalmood gudahood.
Dib u xusuusin: Hoos ka daawo Sawirrada dad Shacab ah oo ciidanka Uganda ku xasuuqeen degmada Qoryooleey